BUDDHIST TERMS' Dictionary: OBJECT OF FETTERS - သံယောဇနိယ
OBJECT OF FETTERS - သံယောဇနိယ
OBJECT OF FETTERS Saṁyojanῑya
သံယောဇနိယ - သံယောဇဉ်အာရုံ။
ရူပက္ခန္ဓာ ဝေဒနာက္ခန္ဓာ သညာက္ခန္ဓာ သင်္ခါရက္ခန္ဓာတို့သည် သံယောဇဉ်အာရုံများ ဖြစ်ကြသည်။ ခန္ဓာငါးပါးအားလုံးကို သံယောဇဉ် အာရုံဟု ခေါ်ကြသည်။ အာရုံတို့၌ တပ်မက်ကပ်ငြိခြင်းကို သံယောဇဉ်ဟု ခေါ်သည်။
Fetters are things which bindabeing to an endless round of rebirths. Such things are rῡpakkhandhᾱ, vedanᾱkkhandhᾱ, saññᾱkkhandhᾱ, saṅkhᾱrakkhandhᾱ and viññᾱṇakkhandhᾱ. In fact, all five aggregates form as objects of fetters. Fetters mean attachment to objects.